Izimbiza zekhandlela lezitsha Abakhiqizi Nabaphakeli - Imboni yezimbiza zamakhandlela eChina
izimbiza ezinkulu zekhandlela lezingilazi ezinezivalo zoqalo
I-Reusable Versatile & Multipurpose - Izimbiza zengilazi ezicacile zingusayizi ofanele ukuthi zisetshenziswe njengezitsha zengilazi zezinongo, isitsha semifino, iziqukathi zesinongo, izitsha zokugcina, izitsha zamakhandlela nezinye izipho ezenziwe ekhaya ezincane ezingangeni moya. Yenziwa thenga izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu ukuze ziqine futhi zibe lula.
Isivalo: isivalo se-bamboo noma isivalo sokhuni
10oz Fafaza imbiza yekhandlela yengilazi epholisha enekhava yoqalo-Buhlaza okwesibhakabhaka/Onsomi/Omhlophe+Mnyama
Ifafazwe emnyama engilazini, yamukele ifaniswe nezivalo ezihlukene, njengesivalo sokhuni esivaliwe, isivalo sensimbi esinensimbi.
Samukela ilebula yangasese kanye nelogo ephrintiwe kasilika njengokufunwa kwakho. Usayizi nombala konke kungenziwa ngokwezifiso, kuphelele kakhulu ekwenzeni amakhandlela e-DIY.
multi-size olufuthwe ingilazi yengilazi ikhandlela iziqukathi
Nikeza isampula yesevisi yokwenza amakhandlela
Usayizi: D8CM*H8.1CM D9CM*H10CM D10.2CM*H12.5CM D11CM*H8CM
500ml izimbiza zamakhandlela zengilazi ezipholisha
black ingilazi engenalutho ikhandlela isitsha
Lezi izimbiza zekhandlela zengilazi eziphucuziwe ezinosayizi abathathu abahlukene. Hlangana nezidingo zakho zamakhono ahlukene. Ithandwa kakhulu emazweni amaningi futhi ingasetshenziswa ukwenza amakhandlela nokugcina okuthile. Sisebenzisa ikhava ye-bamboo eco-friendly ukuze sithuthukise ukuvala nokusebenziseka.
Umbala: Mnyama, futhi yamukela umbala owenziwe ngezifiso
ingilazi ye-matte efriziwe engenalutho yesibambi sekhandlela-champagne/Green
Frosted matte ingilazi umbambi wekhandlela elingenalutho
Usayizi: D7.2CM*H9.1CMM: D8.2CM*H9.8CM
Izinto ezihlala isikhathi eside zengilazi ezinocwecwe oluhle lwe-matt black, isivalo sokhuni sokuqala se-bamboo sinephunga elincane elingathinti ukusetshenziswa. Uma kuqhathaniswa namapulasitiki, ingilazi inempilo futhi iphephile futhi kulula ukuyihlanza. Isivalo sokhuni kanye nendandatho yokuvala i-silicone ivimbela umoya ukuthi ungangeni, yenza indawo evaliwe futhi igcine okuqukethwe komile.